सनबर्न र त्यसको परिणामहरूबाट सुरक्षा - कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्
सनबर्न र त्यसको परिणामहरू विरुद्ध संरक्षण
एकपटक तपाईं एक लम्बस्टर बन्न सक्नुहुन्छ
ग्रीष्मकालीन समय छुट्टी समय हो र सबै प्रकारका गतिविधिहरूको सबै कार्य गर्ने अवसर हो। जवान र बूढा पर्याप्त सनस्क्रिनमा रगत नबिर्सनु हुँदैन। तर किन सनबर्नबाट सुरक्षा यति महत्त्वपूर्ण छ, तपाईलाई तपाइँको छालालाई धेरै सूर्य प्रदर्शनबाट किन सुरक्षित राख्नुहुन्छ र यो गर्ने सबै भन्दा राम्रो तरिका के हो?
सनबर्न र त्यसको परिणामहरू विरुद्ध सुरक्षाको कमी
सूर्यलाइटमा निहित यूवी विकिरणले छाला घटेको हुन्छ जब पनि यो धेरै लामो छ। अन्य चीजहरूमध्ये, यसले दुखाइको खरगोशको कारण हुन सक्छ, जसको छालामा दबाबले धेरै संवेदनशील हुन्छ।
सनबर्नको विरुद्ध संरक्षण
र एलर्जी प्रतिक्रियाहरू सम्भव छन्।
सनबर्नहरू विशेष गरी खतरनाक हुन्छन्, तर विशेष गरी उनीहरूले लामो समयसम्म स्वास्थ्यको क्षति हुनसक्छन्, जस्तै छालाको क्यान्सर।
छुट्टीमा, यो निश्चित रूप देखि एक सनबर्न प्राप्त गर्न को लागि विशेष गरी छ, किनकि यो प्राय: केवल हल्का तरिका मा पहनाएको छ।
यसको अतिरिक्त, एक प्रायः बिर्सन्छ कि आकाशमा आकाशमा वा आंशिक छायामा सनबर्न प्राप्त गर्न सम्भव छ। तातो देशहरूमा यात्रा गर्दा स्थायी सुरक्षा उपायहरू अनिवार्य छन्। सूर्यबाट आफूलाई जोगाउन एक सजिलो तरिका पूर्णतया लुगा लगाउने लुगा लगाउने हो।
सूर्यबाट सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ
किनकि यो सधैँ तातो तापमानमा सुन्दर छैन, यो सम्भवतः हल्का र हावा पारदर्शी हुनुपर्छ। जब तपाईं थोडा सार्नुहुन्छ यसले तपाईंलाई पसीना बनाउँदैन। सूर्य टोपी अलमारी को भाग हो वा एक परजीव को एक विकल्प हो।
केवल एक स्विमिंगटाइइट, एक स्विडिश वा बिकनी पहनें, तपाइँ स्यास्कस्क्रिनमा रिसोर्ट गर्न चाहानुहुन्छ, जुन उच्च SPF छ। चाहे पूर्ण वा हल्का लुगा लगाएर, तपाईले धूप का चश्मा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन, ताकि आँखा अत्यधिक विकिरणबाट सुरक्षित राख्दछ। यदि तपाइँ यी सरल नियमहरू पछ्याउनुहुन्छ भने, तपाईं अब छुट्टीमा जान सक्नुहुन्छ!
यदि छाला उबलिएको लोबस्टर जस्तै रातो हो भने, तपाईंलाई थाहा छ तपाईं सूर्यमा धेरै लामो हुनुभयो। त्यसोभए यदि के तपाईं एक पटक मारा छ भने के गरौं र छाला जलिरहेको छ र खुट्टा छ? कूलिंग क्रीम र लोशनहरू नमीमाईज र त्वचालाई पुनःप्राप्त गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
सनबर्नले छुट्टीको आनन्दलाई सीमित गर्दछ
अक्सर, एलो वेरा वा च्यामिमेन्ट युक्त उत्पादहरू सिफारिस गरिएका छन्। कुन मद्दतको राम्रो, पनि छालाको प्रकारमा निर्भर छ, किनकि यो दायरामा थप क्यान्सर हुन फायदेमंद हुन सक्छ। पीडा राहतको लागि पनि राम्रोसँग के छ, कफ लिफाफे वा बौछारहरू छन्। यसको अतिरिक्त, द्रुत छाला छुट्याउन तपाईंलाई धेरै पीप गर्नु पर्छ।
मध्यम र गम्भीर धूपको लागि, यो औषधीय औषधिबाट औषधि प्राप्त औषध प्राप्त गर्न सल्लाहकारी छ। गृह उपचार सामान्यतया मात्र सीमित छन् सिफारिस। अक्सर प्रायजसो प्रभावित क्षेत्रहरूमा कष्टबारीमा क्वारर्कलाई रमाइलो गर्न सल्लाह दिइएको छ।
यद्यपि यो ठुलो प्रायः सुखद हुन्छ, तर अवस्थित ब्याक्टेरियाको कारणले संक्रमण वा एलर्जी प्रतिक्रियाहरू पनि निम्त्याउन सक्छ, जसले मात्र स्थिति बदतर बनाउँछ।
प्राकृतिक प्रसाधन सामग्री - सूर्यबाट सुरक्षा
यौन दुर्व्यवहार - संरक्षण र लक्षण | शिक्षा
कामुक रंगीन पृष्ठ - आईने को सामने स्वइली
प्राकृतिक प्रसाधन सामग्री - यो कसरी उमेरको बिरुद्ध सुरक्षा गर्दछ
हामी किन ईर्ष्या बाल प्रश्न संग चिल्लाइरहेका छौं
ईदीम - तपाईंको टाउको अगाडि बोर्ड लिनुहोस्